तामसिक रातमा बेपर्वाह पैसा उडाउनेहरू - Naya Aawaj
१० मंसिर, काठमाडौं । पृष्ठभूमिमा एक आँखे प्रवेशद्वार र सम्मुखको मञ्चमा छरिएको रंगबिरंगी प्रकाश-पुञ्जबाट एक अर्धनग्न युवती फुत्त प्रकट हुन्छिन् । गीतसँगै उनको शरीर चलमलाउन थाल्छ -‘याई रे याई रे जोर लगाके नाचे रे चल मेरा संग संग, लेले दुनियाँ के रंग होजा रंगीला रे ….।’
हुक्काको धुँवा र मदिरा मिश्रित गन्धले त्यहाँको माहौललाई थप मादक बनाउँछ । मञ्चमा ठडिएको पिलरमा समातेर ती नर्तकी ‘पोल डान्सर’कै हाउभाउमा प्रस्तुत हुन्छिन् । मञ्चतर्फ फर्काएर ठाउँ-ठाउँमा सोफा राखिएको छ, जहाँ तन्नेरीहरु रसिक मुडमा बसेका छन् । गीतको भाका हाल्दै उनीहरु पनि बसीबसी नाच्छन् । उनीहरुको अघिल्तिर काँचको टेबलमा मदिरा, हुक्कासँगै पैसाको खात छ । नर्तकी जति-जति कामुक भावभंगीमा पेश हुन्छिन्, उत्तिउत्ति मञ्चमा पैसाको वर्षा हुन्छ ।
एक पुरुष सोफाबाट नाच्दै उठ्छन् । नर्तकीलाई आफूनजिक आउन ईशारा गर्छन् । नर्तकीको हातमा समाएर केही क्षण नाच्छन् । त्यसपछि टेबलका केही पैसा नर्तकीको टाउकोमा घुमाएर हुर्‍याउँछन् । उनका साथीहरु जोडले हुटिङ गर्छन् । नजिकैको अर्को सोफामा दुई जोडी युवायुवती रमाइरहेका छन् । त्यसमध्ये छोटो वानपिस लगाएकी युवती बेपर्वाह पैसा उडाइरहेकी छन् । टेबलको मदिरा, हुक्का र स्न्याक्स छाडेर उनी नाच्न तम्सिएकी छन् । घरीघरी मञ्चमा उक्लन समेत खोज्छिन् । तर, उनको खुट्टा लर्बराउँछ । मञ्चमा नाचिरहेका पुरुषलाई बोलाउँछिन् । केही क्षण विन्दास पारामा नाच्छिन् । अनि उमंगमय भावमा पैसा हुर्‍याउँछिन् ।
‘दाइ, हामी पनि त्यहाँ बसौं ?’ फिटिङ्स जिन्स र टिसर्ट लगाएकी, अनुहारमा बढी नै मेकअप गरेकी, अन्दाजी २२-२५ वर्षकी युवती विनम्रताका साथ सोध्छिन् । एक भुक्तभोगी साथी कानेखुसी गर्छन्, ‘यिनीहरुलाई यहाँ बस्न दियो भने वियर र हुक्का खाएरै गोजी रित्याइदिन्छन् ।’ ती युवती जोर-जबर्जस्ती गर्दिनन् । खिन्न हुँदै बारतर्फ गएर साथीहरुसँग छिल्लिन थाल्छिन् । दर्जन जति सोफा र क्याबिन राखिएका छन् । वेटरहरु कालो र सेतो सर्टमा तैनाथ छन् । आधा दर्जन हाराहारी युवती स्कर्ट, वानपिस र फिटिङ जिन्समा ठाँटिएर ग्राहकको ‘स्वागत’ गरिरहेका छन् । युवा-युवतीको अर्को जत्था छ, जो रसिला हाउभावमा रंगीला नृत्य देखाइरहेका छन् ।
महानगरको रात्रीजीवनमा रमाउन को आउँछन् ? शहरिया किशोर-किशोरी ? पैसावाल तन्नेरी ? धनाढ्यका सन्तान ? व्यापारी ? एक भुक्तभोगी सुनाउँछन्, ‘सबैखाले हुन्छन् । तर, धेरैजसो चाहिं ३०-४० उमेरका वयस्क देखिन्छन् ।’ धेरैजसो बेलामौकामा मात्र यो खर्चिलो रात साट्न आइपुग्छन् । खासगरी सप्ताहन्तमा । केही भने नियमित रुपमै रात्रीजीवनमा हेलिन रुचाउँछन् । ‘एलओडीमा एउटै टेबलको, एक रातमा दुई-तीन लाख तिर्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘कुनै रात त्यो टेबल खाली हुँदैन । एक रातमै लाखौं उडाउँछन् ।’